ဤစာမျက်နှာတွင်စာရင်းနှစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ (၁) ညစ်ညမ်းသောလိင်မှုဆိုင်ရာပြorနာများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများနှင့်နှိုးဆွမှုနှင့်ဆက်စပ်မှုကိုလေ့လာခြင်း၊ (၂) ဆောင်းပါးများ၊ ထုတ်လွှင့်မှုများ၊ ရေဒီယိုအစီအစဉ်များနှင့်လိင်မှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများပါ ၀ င်သည့်ရုပ်သံလွှင့်ဌာနများတွင်လိင်မှုကိစ္စပြတ်တောက်မှုရှိကြောင်းအတည်ပြုသူ။
စာရင်းတစ်ခု: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ porn အသုံးပြုမှု / ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများစွဲခြင်းနှင့်နိမ့် arousal ချိတ်ဆက် 40 လေ့လာမှုများကျော်ပါဝင်သည်။ အဆိုပါ ပထမဦးဆုံးအ7လေ့လာမှုများ စာရင်းတွင်ဆန္ဒပြ causation, သင်တန်းသားများအဖြစ် porn အသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းနှင့်နာတာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အနာကိုငြိမ်းစေ။
လေ့လာ: နှင့် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (2014) မပါဘဲပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Cue reactivity ၏အာရုံကြောဆက်စပ်
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပြုခြင်းနှင့်လိင်အရိပ်လက္ခဏာကင်းမဲ့သောလိင်ကြိုက်နှစ်သက်မှုနှင့်လိင်လိုလားမှုတို့နှင့်ပတ်သက်သောကျား၊ မကွဲပြားမှုများ - အသိုင်းအဝိုင်းနမူနာလေ့လာမှု (၂၀၁၈)
လေ့လာ: EAU 2020: ပိုဆိုးသော၊ ပိုမိုဆိုးရွားသည့် Erectile Function (၂၀၂၀)
စာရင်း TWO: ဆောင်းပါးများ, ထုတ်လွှင့်ရေဒီယိုရှိုးများ, နှင့်ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်၏တည်ရှိမှုကိုအတည်ပြုတဲ့သူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများပါဝင်ကြောင်း, podcasts ။
YBOP 2011 ကျော် 150 တွင်အွန်လိုင်းသို့ရောက်လာသောကတည်းကဝန်ခံနှင့်ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများပြုမူဆက်ဆံသူကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများက (urology ပါမောက္ခ, ဆီးရောဂါပါရဂူ, စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်, စိတ်ပညာရှင်, sexologists, MDS) ဆောင်းပါးများထုတ်ဝေသို့မဟုတ်ရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားပေါ်သည်ထင်ရှားပါပြီ။ မှတ်ချက်: ဆီးရောဂါပါရဂူအမေရိကန်ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအသင်းနှစ်ပတ်လည်ညီလာခံမှာညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အထောက်အထားနှစ်ကြိမ်တင်ဆက်ခဲ့ကြသည်။
ဘီစီဘီစီအမျိုးသမီးများနေ့က porn ကြည့်ရှုသူအမျိုးသမီးများအပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကို Neelam Tailor & psychosexual therapist Angela Gregory (2019) နှင့်ဆွေးနွေးထားသည်
ဘီဘီစီရေဒီယိုက 'ကျွန်မရဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းမှုက erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဘယ်လိုဖြစ်စေခဲ့သလဲ။
erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက်အွန်လိုင်းမှအကူအညီတောင်းခံသူများသည်သင့်ကိုအံ့အားသင့်စေနိုင်သည် (DailyDot)
ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု၏“ ဒီရေလှိုင်း” သည်ကျွမ်းကျင်သူများ၏သတိပေးချက်အရလာမည့် 'ပျောက်သောမျိုးဆက်' ကိုကယ်တင်ရန်အရေးယူရန်လိုအပ်သည် (Pauline Brown)
ဟော်မုန်းကျွမ်းကျင်သူဒေါက်တာ Kathryn Retzler porn-သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (2017) ဆြေးြေိံး
ပါမောက္ခ Sam Vaknin က Porn သည်လိင်ကိုဘယ်လိုဖျက်ဆီးခဲ့သလဲ
Feminist စာရေးဆရာနောမိ Wolf ကဗြိတိန်လျော့နည်းလိင်ဆက်ဆံနေကြဘာဖြစ်လို့တစ်ခုမငြိမ်ရှင်းပြချက်ရှိပါတယ်: ဘယ်လို porn အသက်ရှင်တော်မူသည်ခေတ်သစ်လိင်ဖျက်ဆီးနေသည်
အွန်လိုင်း PORN သည်သင်၏လိင်အသက်တာကိုဖျက်ဆီးနေသလား။ Sexpert ဒေါက်တာဟယ်ရီဖစ်ခ်ျကရှင်းလင်းပြတ်သားသောရုပ်ပုံများသည် 'fast food' နှင့်သင်၏လိင်စိတ်ကိုမည်သို့ဖျက်ဆီးသည်ကိုဖော်ပြသည်
ဘန်ဂလိုများတွင်မြင့်တက် porn စွဲလား? ကုထုံး Rajan B ကို Bhonsle
နည်းပညာ (ဟာသဗဟိုပြပွဲ) ဟာဦးနှောက်ကိုဖျက်ဆီးသည်။ အလက်ဇန္ Katehakis, MFT, CSAT-S က, CST-S က (2017)
တိုက်ရိုက်ဘလော့ခ်: Porn-သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ဒေါက်တာအာဗြဟံသည် Morgentaler, ဂါယူဆပါသည်)
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ porn ကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ် porn / လိင်စွဲချိတ်ဆက်အများအပြားလေ့လာမှုများ
လုလင်တို့သည်လည်း (Global News, ကနေဒါ) အတွက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဖြစ်စေတဲ့ porn
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အတွက် porn စေထ (Urology ပါမောက္ခဒါဝိဒ်သည် Samadi MD)
porn-သွေးဆောင် ED (အပိုင်း 2) ကိုအမေရိကန်ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအစည်းအရုံးညီလာခံ, မေလ 6-10, 2016 မှာပေးအပ်သည်။ ဆီးရောဂါပါရဂူ Tarek Pacha (ဗီဒီယို)
porn-သွေးဆောင် ED (အပိုင်း 3) ကိုအမေရိကန်ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအစည်းအရုံးညီလာခံ, မေလ 6-10, 2016 မှာပေးအပ်သည်။ ဆီးရောဂါပါရဂူ Tarek Pacha
ယောက်ျားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအကြောင်းရင်းများ၊ ရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့်ကုသမှုနည်းလမ်းများ - Kathryn Retzler, ND
ယောက်ျားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု - အကြောင်းရင်းများ၊ ရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့်ကုသမှုနည်းလမ်းများ။ ကက်သရင်း Retzler, ND (၂၀၁၈)
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်: Porn အပေါ်နှိပ်စက်ညှင်းပန်းခြင်း၏စက်လှေကားစျေးရောဘတ် Weiss LCSW, CSAT-S ကဖြင့်
Sudeepta Varma, MD စိတ်ရောဂါကုသမှုအားဖြင့်ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုတို့အတွက်ဖြေရှင်းချက်,
လေ့လာမှု - အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းသုံးစွဲမှုသည်လူငယ်များတွင်အော့ဖ်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသလား။ နိုင်ငံတကာ web-based စစ်တမ်း (၂၀၂၁) ကို အခြေခံ၍ ဘက်စုံကွဲပြားခြားနားသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း
လေ့လာမှု - လိင်အလိုဆန္ဒလျော့နည်းလာခြင်းနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများပြားလာခြင်းအတွက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအပြစ်တင်သည်။ Dr. Carlo Foresta (2014)
ဗွီဒီယို - Porn သည် Erectile Dysfunction နှင့် Impotence ကိုသွေးဆောင်နိုင်ပါသလား။ ရှင်ပေါလု Kattupalli MD ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်
ဗွီဒီယို - Porn-Inced Erectile Dysfunction တကယ်လား? (၅ မိနစ်)
ဗီဒီယို: Brad Salzman၊ LCSW၊ CSAT မှ Porn-inced Erectile Dysfunction
erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကြုံတွေ့ရပိုပြီးညစ်ညမ်းရှုမြင်သူကိုလူပျိုတို့, လေ့လာမှု (ဒေါက်တာမော်ဂန် Francis က, 2017) ကပြောပါတယ်
လေ့လာမှု: လူငယ်တွေကလိင်ဘဝတွေကိုနှင့်အတူ '' ဇွဲနှင့်စိတ်ပျက်ဖွယ်ရာ '' ပြဿနာကိုသတင်းပို့